Xaflada Sagoontinta Safiirka Shan-Wadan Oo African ah - Cakaara News
Xaflada Sagoontinta Safiirka Shan-Wadan Oo African ah
Jigjiga( cakaaranews ) Sabti 12ka March 2016, Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay islamrakaana ujeedadeedu ahayd sagoontinta mudane Mustafe Deeq Cabdisalaan oo ah safiirka dalka JDFI u fadhiyi doona wadamada kala ah Zimbabwi, Zambia, Mozambique, Angola, iyo mauritius.
Xafladan ayaa waxaa kasoo qaybgalay Madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka Xafiiska Beeraha iyo Horumarinta Khayraadka Dabiiciga ah Marwo Sucaad Axmed Faarax, Kabinetka-deegaanka maareeyayaasha wakaaladaha iyo waliba Agaasinada Xafiisyada iyo Wakaaldaha DDSI, sidookale waxaa xaflada iyaguna si adag uga qaybqaatay kooxaha fanka iyo suugaanta DDSI oo soo bandhigay heeso guubaabo ah islamarkaana katurjumaya Horumarka uu deegaanku gaadhay dhankasta.
Hadaba xafladan ayaa waxaa ugu horayn kahadlay Madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka Xafiiska Beeraha iyo Horumarinta Khayraadka Dabiiciga ah Marwo Sucaad Axmed Faarax oo sheegtay in ay aad ugu faraxsantahay xafladan qaaliga ah ee loo sameeyay safiirka da’da yar ee waxbaratay islamarkaana deegaanka udhashay mudane Mustafe Deeq Cabdisalaan, . Sidookale waxa ay xustay in ay horumarka deegaanku uu gaadhay heer-sare islamarkaana lagu garanayo aqoonyahamiinta dadyar ee deegaanka u soobaxaya maalinba maalinta kadanbaysa. Ugudanbayana waxa uu madaxwayne kuxigeenku hadalkeedii ku gabagabaysay sifarxadleh aan u wada sgootino safiirkeena iyadoo sidookalena u ducaysay safiirka in uu noqdo mid xilkiisa iyo waajibaadkiisa kasoobaxa.
Sidookale waxaa isna hadalo muhiima kasoojeediyay xaflada Safiirka Shanta wadan ee Simbaawi, Saambiya, musaambik, Angola iyo Mauritius mudane Mustafe Deeq Cabdisalaan oo sheegay in uu aad ugu faraxsanayahay xafladan qaaliga ah ee lagu sagoontinayo, waxa uuna xusay safiirku in ay kagontahay in uu kasoobaxo xilka iyo waajibaadkiisa loo idmaday islamarkaana uu noqon doono mid bulshada DDSI ay ku faraxdo. Sidookale waxa uu safiirku aad ugu mahadceliyay Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, isagoo tilmaamay in uu yahay aabaha horumarka islamarkaana fursadan qaaliga ah ee safiirka shanwadan uu isagu sababay inay timaado.
Ugudnabayna madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka Beeraha iyo Horumarinta Khayraadka Dabiiciga ah Marwo Sucaad Axmed Faarax iyo waliba wasiir kuxigeenka Xafiiska Maamulka DDSI mudane Deeq Cabdulaahi Buraale ayaa siwada jir ah u gudoonsiiyay hadyad loogu talagalay safiirka shanta wadan mudane Mustaf Deeq Cabdisalaan.